Zig Zag - အခဈြဦး (Album )
Heavy Weight - Bo Htet [Album]
99 Symphony Bo Htet Frez Jimmy Jacobs Latest Albums Lil' Z Mee No Nay SGL Trippy Apes Yair Yint Aung Yung Hugo
All For You - T.X (ft - Yan Shin)
T.X Yan Shin
အူတှအေသညျးတှယေား - Hlwan Paing, Lil Chan
Hlwan Paing Lil Chan
My Time is Now - Bo Htet, Lil'Z, Jimmy Jacobs, Nay, 99 Symphony, SGL, Trippy, APE$, Yung Hugo, Frez
99 Symphony APE$ Bo Htet Frez Jimmy Jacobs Lil' Z Nay SGL Trippy Yung Hugo
အမုနျးပငျ - Shwe Htoo
Shine – Perfect (album)
Latest Albums Shine
The Number One - Oak Soe Khant ( Album )
Latest Albums Moe Htet (B+) Oak Soe Khant
အဆင်ပြေတယ် - Ko Htett x Htoo Way
Htoo Way ko htet
Fool - Bhone Pyae Sone
Bhone Pyae Sone
ငါတို့ အထာ - Bigg Ze & B Force
B Force Bigg Ze
Almost Die - Si Thu , Phyo Lay , Darker
DARKER Phyo Lay Sithu
ကွီးကွီးသေးသေး - ခမျြးအေးဝငျး + ဘိုလေး + ရသ (MTV)
Song Name : ကွီးကွီးသေးသေး Vocals : ချမ်းအေးဝင်း , ဘိုလေး , ရသ Download with MediaFire
4 Album - Shwe Htoo, Lil'Z, X Box, Htet Yan
Download with Pcloud link 1. အရှိတ်တည့်တည့် (X-Box) 2. Good Luck (Htet Yan) 3. ဟီး ဟီး ဟား ဟား (Lil Z) 4. 8 days,8 months,8 hours (Shwe Htoo Ft:G Fatt) 5. World Used Love Talk (Lil Z) 6. Boy Friend No.2 (Htet Yan) 7. Ever New (X-Box) 8. Your Audience (Shwe Htoo) 9. This Song Is For You (Htet Yan) 10. Anniversary (Shwe Htoo) 11. Mind(X-Box,Mg Thiha,Susandi Htun) 12. ရန်ကုန်အထာ (Lil Z Ft-Bunny Phyoe,C-Hokker,Bigg-Zee) 13. ပုိုးဆုိုးပတ်စက် (Htet Yan) 14. Necklace(Lil Z) 15. Crush(Accoustic) (Shwe Htoo) 16. Shein(X-Box Ft-Yair Yint Aung) Download Whole Album - Box , MediaFire
ဂီတစာဆို လှမျးပိုငျ - လှမျးပိုငျ Hlwan Paing [Album] (2014)
Download MediaFire Link 01. ဂီတစာဆိုလွှမ်းပိုင် 02. Beautiful 03. ကျိန်စာ 04. ကိုကို (feat: အိမ့်ချစ်, Bobby Soxer) 05. မင်းရဲကျော်စွာ ဗိုလ်နေတိုး 06. သူငယ်ချင်းသို့ပေးစာ 07. အသက်သွင်းပေးပါ 08. လက်တွေမြှောက် (feat: Bobby Soxer) 09. ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် 10 . ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ကောင်မလေး(feat: Bunny Phyoe) 11. Disco 12. ရုပ်ဆိုး 13. ဘော်ဒါမကောင်းသူကောင်းမဖြစ် (feat: ရဲရင့်အောင်) 14. The Whole Burma First (feat: Lil Z) 15. မာလကီးယား 16. တစ်ခါက တက္ကသိုလ် Download DropBox Link 01. ဂီတစာဆိုလွှမ်းပိုင် 02. Beautiful 03. ကျိန်စာ 04. ကိုကို (feat: အိမ့်ချစ်, Bobby Soxer) 05. မင်းရဲကျော်စွာ ဗိုလ်နေတိုး 06. သူငယ်ချင်းသို့ပေးစာ 07. အသက်သွင်းပေးပါ 08. လက်တွေမြှောက် (feat: Bobby Soxer) 09. ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် 10 . ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ကောင်မလေး(feat: Bunny Phyoe) 11. Disco 12. ရုပ်ဆိုး 13. ဘော်ဒါမကောင်းသူကောင်းမဖြစ် (feat: ရဲရင့်အောင်) 14. The Whole Burma First (feat: Lil Z) 15. မာလကီးယား 16. တစ်ခါက တက္ကသိုလ် Download Whole Album >> MediaFire Dow
စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ - ဒိတျဒိတျကွဲ
Featuring : ဖြိုးကြီး ၊ သအို ၊ ဘန်နီဖြိုး ၊ ငယ်ငယ် ၊ ကိကိ ၊ Nanda Sai ၊ စိုးကြီး ၊ John ၊ သီရိဆွေ ၊ အိမ့်ချစ် 01 ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ 02 အလွမ်းအထာ 03 ဟိုက်ရှားဘား 04 ဝိညဉ်ဖက် 05 ပြီးခဲ့သောဇတ်လမ်းအကျဉ်း 06 နား…နား…နား… 07 ရက်စက်မှကြေကွဲ 08 ရည်းစားစာ 09 ဒီလိုဆို လူရှိန်ပြီ 10 အပြာရောင်လမ်းခွဲ 11 ဘုတ်ဖြစ်ပြီ 12 ချာတိတ်အတွက် 13 ဆရာမကြီး 14 တစ်ကိုယ်တော် Valentine Whole Album Download With Mediafire ( New Link Updated On 13.2.13 ) Whole Album Download With Hulkshare Whole Album Download With Dropbox If You Can't Download With Above Links,Try With Below One Click Download Links Especially,This Is For Mobile Phone Downloader 01 ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ 02 အလွမ်းအထာ 03 ဟိုက်ရှားဘား 04 ဝိညဉ်ဖက် 05 ပြီးခဲ့သောဇတ်လမ်းအကျဉ်း 06 နား…နား…နား… 07 ရက်စက်မှကြေကွဲ 08 ရည်းစားစာ 09 ဒီလိုဆို လူရှိန်ပြီ 10 အပြာရောင်လမ်းခွဲ 11 ဘုတ်ဖြစ်ပြီ 12 ချာတိတ်အတွက် 13 ဆရာမကြီး 14 တစ်ကိုယ်တော် Valentine Related Albums Of စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်-အဲဗားဂေါ်လီ စိုင်းစိုင်းခမ်
၀၁။ တိုင်းသိပြည်သိ ၀၂။ ဝပြီးရင်းကိုဝ Feat : ကျော်ထွဋ်ဆွေ ၀၃။ ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဆောင် Feat : လွှမ်းပိုင် ၀၄။ အမိုက်တကာ့ အမိုက်ဆုံး ၀၅။ Long Distance Feat : ပန်းနီ ၀၆။ အယ်စတုံ ၀၇။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပွါး Feat : သားကြီး ၀၈။ အဆိုတော် / မင်းသား / ဒါရိုက်တာ Feat ASH ၀၉။ ပြည်တွင်းဖြစ် နိုင်ငံခြားသူ ၁၀။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပွါး(Unplugged) Feat သားကြီး ၀၁။ တိုင်းသိပြည်သိ ၀၂။ ဝပြီးရင်းကိုဝ Feat : ကျော်ထွဋ်ဆွေ ၀၃။ ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဆောင် Feat : လွှမ်းပိုင် ၀၄။ အမိုက်တကာ့ အမိုက်ဆုံး ၀၅။ Long Distance Feat : ပန်းနီ ၀၆။ အယ်စတုံ ၀၇။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပွါး Feat : သားကြီး ၀၈။ အဆိုတော် / မင်းသား / ဒါရိုက်တာ Feat ASH ၀၉။ ပြည်တွင်းဖြစ် နိုင်ငံခြားသူ ၁၀။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပွါး(Unplugged) Feat သားကြီး Whole Album Download With Mediafire Whole Album Download With Hulkshare Updated @ 7.3.13 Whole Album Download With Box Download With Dropbox Download With 4shared You Can Also Try With Minus Here & Here Credit to MAMC First Solo Album Of Jouk Jack "ဂျောက်ဂျက်-ငါသည်သာငါ့ပြိုင်ဖက်" Is
Mg Ye' Phyoe
Minn Khank Maw
Lin Bin Hein
Pyae Phyoe Paing
Pyonn Mya Thwe
Thi Han San
A Lyinn Yaung
Billy Lamin Aye
CThu Cho Gyi
G Ray Z
Khit Saung Hmue
Khoon Sha Cho
Lin Thit Nay
May Thant Kyaw Min
Mg Wai Gyi
Mg lin Htet
Soe Sa Naing
Wai Phyo Htike
A Linn Thway
Ag Nay Oo
AggaMin Htin Oo
Aung Ko Ko Zaw
Barbie Lay Mc
Chaw Zaw Min
Chuu Thet Htar San
Crash Tone Fill
DJ Yu Beatz
DNA Brother Hood
Dr. Sai Lay
Hein Htut Ag
Htet Nay Win
J Mine My
Justice Black Too
K Zatt H
Kaung Chit Wine
Kaung Myat Noe
Khaing Khant Zaw
Khaing Kyaw Swar
Khaing Thazin Ngu Wah
Khine Thazin Thin
Ko Kyaw Ye'
Ko Py B.H.K
La Min Thant Zin
Lay Lay Pi
Lin Satt Phyo
MC Kaung Htet
MC Ko Thu
MC Naing Lin
May lay BMCC
Mg Ga Nge
Mg Khant Maung
Mg Kyaw Thet
Mg Lin Lin
Mg Linn Latt
Mg Little TY
Mg Nyar Na
Mg Pauk Kyine
Moe Xtet Tun
Myat Su Su Aung
Myo Han Tun
Naw May Hsu Pan
Nyan G Xinn
Nyein Yan Khant
Nyi Kabar Soe Ya
Nyi Nyi Paing
Nyi Shinn Thant
Paing phyo Oo
Sai Min Khant
Sanay Hein Zay
Sentinel Brother Hood
Shinn Thant Bo
Shwe Pxone Kyaw ( White Soul )
Skill Rearm Gang
Swan Pyae Naing
T - Prime
Thar Ye Naung
Txaw Zin Oo
U Phat Kyan
Wai lin (T.Y.T)
Win Naung Seven Zipper
Win Nay Zar
Y K Man
Ya Plus - Sniper
Yazar Myo Thank
Ye Aung Htike
Ye Wont Aung
Ye Yint Waiyan